China Aseptic Liquid nitrogen Dosing Machine yeAseptic Kuzadza Machine vanogadzira uye vatengesi |Willman Machinery
Aseptic Liquid nitrogen Dosing Machine yeAseptic Kuzadza Machine
Basa: Aseptic Liquid nitrogen dosing
Dosing Speed: Maximum 1330 mabhodhoro / min
Chimiro cheAspetic: 99.99999%
Package: PET bhodhoro / aluminium inogona / girazi bhodhoro
Delivery Nguva: 45 mazuva
Aseptic liquid nitrogen dosing machine ndicho chigadzirwa chedu chitsva chakatangwa.
Kuburikidza nekuenderera mberi nekutsvagisa uye kuyedza, timu yedu yehunyanzvi yakawana budiriro pamushini wekuzadza aseptic liquid nitrogen.
muchina uyuzvakatoratidzwa nemutengi wedu sechigadzirwa chakabudirira,
Iyo aseptic chimiro chechigadzirwa chakazadzwa chasvika 99.99999%.
Uku ndiko kumwe kubudirira kwatakawana mukugadzirwa kwechigadzirwa chitsva.
Ndokumbira utibate kuti uwane rumwe ruzivo nezve aspetic liquid nitrogen dosing muchina
Kero: NO.69 Xinychi Road, Donggang Sub-district, Putuo District, Zhoushan, Zhejiang Province, China.
Nharembozha/Wechat/Whatsapp : +8618042297890
Chikwata chedu chine hunyanzvi chinokupa iwe basa rehunyanzvi kusanganisira dhizaini dhizaini.Kutevedzera kuchengetedza kwesimba, kuchengetedza kwevashandi, uye kuwedzera kugona, isu tinotarisisa zvakanyanya kunaka mune zvigadzirwa zvedu zvatinogadzira.
Tinogona kupa muchina unomhanyisa vhidhiyo yekutarisa, kune rumwe ruzivo uye sevhisi, ndapota taura nesu.
*Kuisa / Kutuma / Kudzidziswa:
1 - Isu ticharonga tekinoroji yekumisikidza muchina, kutumira uye kupedzisa kugadzirwa kweyedzo kusvika michina ifambe zvakanaka.
2 - Tekinoroji yedu ichapa machie mashandiro ekudzidzira kune mutengi mufekitori yemutengi.
3 - Isu tinovimbisa kuti zvigadzirwa zvedu zvitsva.
1 - Mushure mekutarisa, tinopa mwedzi gumi nemaviri sechivimbiso chemhando, kupa pachena kupa kupfeka zvikamu uye kupa zvimwe zvikamu pamutengo wakaderera.
2 - Kana iwe ukatadza kugadzirisa matambudziko, isu ticharonga tekinoroji kufekitori yako kugadzirisa matambudziko.
3 - Mushure mekuvimbisa kwemhando, tinopa rubatsiro rwehunyanzvi uye mushure mekutengesa-basa.
A1: Tine referensi chirongwa mune dzimwe nyika, Kana tikawana mvumo yemutengi auya nemichina kubva kwatiri, tinogona kukuudza ruzivo rwavo, unogona kuenda kunoona fekitori yavo.
Uye unogara wakagamuchirwa kuti uuye kuzoshanyira kambani yedu, uye kuona muchina uri kushanda mufekitori yedu, tinogona kukutora kubva kuairport muguta redu.
Bata vanhu vedu vekutengesa unogona kuwana vhidhiyo yemuchina wedu wereferensi
Q2: Iwe unopa yakagadziridzwa sevhisi
A2: Tinogona kugadzira michina zvinoenderana nezvaunoda (zvinhu, simba, rudzi rwekuzadza, marudzi emabhodhoro, zvichingodaro), panguva imwe chete isu tinokupa mazano edu ehunyanzvi, sezvaunoziva, tanga tiri mune ino. indasitiri kwemakore mazhinji.
Q3: Ndeipi vimbiso yako kana waranti yemhando kana tikatenga michina yako?
A3: Tinokupa michina yemhando yepamusoro ine 1 gore garandi uye inopa hupenyu-hurefu rutsigiro rwehunyanzvi.
Zvakapfuura: Carbonated zvinwiwa aluminium inogona kuzadza uye yekusona muchina
Zvinotevera: Liquid Nitrogen Dosing Machine yeCan kana bhodhoro Kuzadza Machine
Aseptic Liquid nitrogen Doser yeaseptic filli...
Chii chakanakira liquid ...
Zvisiri-doro maitiro muzvinwiwa zvinounza...
Blake's Hard Cider Paloma / Cocktail ...
Kuderedzwa kweCarbon pane sosi!̶...